Basikety – Coupe du Président Top 8 : tsara toerana ny GNBC Vakinankaratra | NewsMada
Basikety – Coupe du Président Top 8 : tsara toerana ny GNBC Vakinankaratra
Tsara fanombohana ary tsy mbola resy ny GNBC teo amin’ny fifanintsanana amin’ny Top 8 amin’ny fiadiana ny “Coupe du Président”, andiany faharoa. Tsara toerana ity ekipan’ny zandarimariam-pirenena ity, hatreto.
Mafy. Fandresena roa avy hatrany no azon’ny GNBC (Vakinankaratra) teo amin’ny andro voalohany sy faharoa amin’ny fiadiana ny Top 8 eo amin’ny « Coupe du Président », taranja basikety. Fifaninanana mizotra, amin’izao fotoana izao, etsy amin’ny lapan’ny Fanatanjahantena Mahamasina.
Teo amin’ny andro voalohan’ny fifaninanana, nandresy ny SBBC (Boeny), tompondakan’ny « Play-off » tany Mahajanga, tamin’ny isa 69 noho 61, ny ekipan’ny zandarimariam-pirenena GNBC. Mbola fahombiazana ihany koa no azon’izy ireo teo amin’ny andro faharoa rehefa nandresy ny 2BC (Vakinankaratra) tamin’ny isa 63 noho 55. Hatreto, tsara toerana eo amin’ny vondrona misy azy ny GNBC.
Tsy nampoizina kosa ny vokatra azon’ny Ascut (Atsinanana). Ratsy fanombohana ity ekipan’Atsinanana sady tompondakan’ny « Coupe du Président » farany teo ity. Lavon’ny Cospn (Analamanga) tampoka teo amin’ny andro voalohan’ny Top 8 ny Ascut (61 noho 56). Toraka izany koa ny TTS (Amoron’i Mania), izay resin’ny Cosfa (Analamanga) tamin’ny isa 88 noho 64. Na izany aza, nanarina ny lesoka ny Ascut ka nandavo ny TTS tamin’ny isa 71 noho 58, teo amin’ny andro faharoa.
Mitohy kosa ny hetsika mandritra ity herinandro ity ary mbola ady goavana ny an’ireo ekipa valo voasokajy hiatrika ny Top 8 amin’ny « Coupe du Président ».
2BC (Vakinankaratra) # Challenger (Analamanga) : 63 – 57
TTS (Amoron’i Mania) # Cosfa (Analamanga) : 64 – 88
SBBC (Boeny) # GNBC (Vakinankaratra) : 61 – 69
Cospn (Analamanga) # Ascut (Atsinanana) : 61 – 56
Challenger (Analamanga) # SBBC (Boeny) : 52 – 82
GNBC (Vakinankaratra) # 2BC (Vakinankaratra) : 63 – 55
BFT (Analamanga) # MB2All (Analamanga) : 45 – 108
JEA (Vakinankaratra) # Fan (Analamanga) : 48 – 63